Iphakathi kwekhasika ngokufanele: izici zokuqeda, uhlelo, amathuluzi
I-pear iyisiko engadini elihlwabusayo futhi eliwusizo elijabulisa izingane nezingane. Ikhasi elikhulile ezindaweni ezingaphansi komhlaba, amapulazi amakhulu nezindawo zemifino emikhulu. Izithelo zalesi sihlahla zithandeka kakhulu, zinamanzi futhi zitholile. Zisetshenziswa kabusha, futhi zenziwe ngokucubungula (ukwenza i-marmalade, ijusi ne-jam).
Pear "Marble": isici ebangeni kanye agrotechnology ukulima
Izinhlobonhlobo zamapheya we-"Marble" ngenye yezinto ezithandwa kakhulu emgqeni wethu. Unomkhiqizo ophezulu, uveza izithelo ezinamanzi, abalimi abaningi bafuna ukukhulisa isihlahla emasimini abo. Ingozi yalolu daba lukhulu - isihlahla asifani nakakhulu ngokubanda kwebusika, kepha ngokunakekelwa ngokucophelela kulo msebenzi uzoba impumelelo enkulu.